We Fight We Win. -- " More than Media ": ကျော်ဆန်း ( သို့ မဟုတ်) နိင်ငံတော် ဖိုးတွမ်တီ
ကျော်ဆန်း ( သို့ မဟုတ်) နိင်ငံတော် ဖိုးတွမ်တီ
အမည်ရင်း - ကျော်ဆန်း။
တာဝန် - ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး။
တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုမရှိသေးတဲ့ အချိန်မှာ ဥပဒေ အရ အရေးယူခိုင်းနေတာက လက်တွေ့ မကျဘူးထင်တယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ရအောင် အရင်လုပ်ပြီးမှ ဥပဒေအတိုင်း စီရင်ခိုင်းမှ တကယ့်တရားဥပဒေ အတိုင်းစီရင်မှုကို ရစေမှာပေါ့။
Request our New Government,
Law and Order must be fair and square for our people. Take action for these huge corruptions of Department of Ministries include Ministers and officers. Let show all our people and the world how New Government respect Law and Order right now. Don't take action only move and replacement concluded. Pls don't lie and trick ever our poor people like the Detector Ne Win, Maung Maung, Than Shwe. Show up.